आँप खानुहोस् क्यान्सर भगाउनुहोस् , जान्नुहोस् आँप खानुका १२ फाइदा
काठमाडौँ , असार ८ । गर्मी महिनाको आगमनसँगै बजारमा आँप पनि देखिन थालेका छन् । तर, अहिले आएका आँप भने औषधी प्रयोग गरेको पकाइएका हुनाले ती आँपको प्रयोगले फाइदा भन्दा बढी बेफाइदा गर्छ । स्वस्थ आँपको प्रयोगले मानव शरिरलाई निकै फाइदा पुर्याउँछ ।
नाकाबन्दी अन्त्य गर्न साउदी अरबले पेश गर्यो १३ बुँदे सर्त, अब कतार के गर्छ ? 14 hours ago
एजेन्सी– साउदी अरब र कतारसँग कुटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गरेका अरब देशहरुले संकट अन्त्य गर्नको लागि कतारसँग १३ बुँदे सर्त राखेका छन् ।
निर्वाचन आयोग सरकारको लाचार छायाँ बन्दै गएको एमाले महासचिवको आरोप
विराटनगर, असार ९ । नेकपा एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेलले निर्वाचन आयोग सरकारको लाचार छायाँ बन्न खोजेको भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन् ।निर्वाचन आयोगका पछिल्ला गतिविधिले आयोग सरकारको छायाँ बन्न खोजेको भान भइरहेको भन्दै उनले निर्वाचन आयोगको गतिविधि लाचार छायाँ बन्ने तर्फ उन्मुख भएको बताए । नेपाल आइडलका निर्णायकलाई सोधियोः गेटअपकै आधारमा निर्णय गर्ने भए डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गएर कपडा छान्नुस् (भिडियो)
काठमाडौं, असार ९ । युवामाझ अत्याधिक लोकप्रीय बनेको रियालिटी शो नेपाल आइडल विभिन्न कोणबाट अलोकप्रीय पनि बन्दैछ । निर्णायकहरुको निर्णय गर्ने तरिका र शैलीलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी हुन थालको छ ।
चीनमा कुकुरको मासु खाने महोत्सव सुरु, किन खाइन्छ कुकुरको मासु ? पढ्नुहोस्
एजेन्सी । चीनको युलिन शहरमा विवादित ‘डग मिट फेस्टिवल’ अर्थात कुकुरको मासु खाने महोत्सव सुरु भएको छ । गुवाँग्शी प्रान्तमा प्रत्येक वर्ष मानिसहरु कुकुरको मासु खान एकजुट हुने गर्छन् ।
यी १० देशमा सबैभन्दा धेरैले गर्छन् आत्महत्या, जापान र दक्षिण कोरिया कति औ स्थानमा ? 14 hours ago
एजेन्सी–आत्महत्त्या लिएर विभिन्न विश्लेषण गरिन्छ । एकथरीको भनाई छ, ‘आत्महत्या भनेको कमजोरले गर्ने काम हो ।’ अर्काथरीको भनाई छ, ‘आत्महत्या गर्न पनि ठुलो साहस चाहिन्छ ।
कतै यी कारणहरुले गर्दा तपाईको जीवनमा समस्याहरु आइरहेको त छैन ? 15 hours ago
एजेन्सी–भागदौडले भरिएको जीवनमा बाचिरहेका मानिसले धेरै कुरामा ध्यान दिन सकिरहेको हुँदैन । यसका कारण उसको जीवनमा धेरैभन्दा धेरै जटिल समस्याहरु आइनै रहन्छन् । चाहे त्यो जीवन साथीसँगको सम्बन्धमा नै किन नहोस् ।
कहिले धूलोमाण्डू, कहिले खाल्डोमाण्डू, अहिले हिलोमाण्डूः हेर्नुहोस् १० तस्बिरमा हाम्रो काठमाण्डू
काठमाडौं, असार ९ । बर्षायाम सुरु हुनुभन्दा अघिसम्म काठमाडौंबासीले ‘ज्यानमारा धूलो’को सामना गर्नुपर्यो । र, बर्षायाम सुरु हुनासाथ जताततै हिलोको सामना गर्नुपरेको छ ।
इलाम, असार ९ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले निर्वाचनपछि मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजानुपर्ने बताएका छन् । इलामको रोङ गाउँपालिकाको शान्तिपुरको बरफल्याङमा आज बिहान आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नेता खनालले अशिक्षा, बेरोजगारी र गरिबीलाई हटाउन नेकपा एमालेको नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए ।
तालु खुइले हुनबाट बच्च चाहनुहुन्छ ? यस्ता घरेलु उपायहरु अपनाउनुहोस्
एजेन्सी–हाम्रो शिरमा कपालका १ लाख रेसाहरु हुन्छन् । एक दिनमा ५० देखि १०० रेसा टुट्नु सामान्य मानिन्छ । तर, यो भन्दा अधिक कपाल झरेमा भने तालु खुइले हुने सम्भावना उच्च भएर जान्छ । यसका लागि केही उपायहरु लगाउनु आवश्यक पर्छ ।
« 12345678...20962097 »